डिप्रेसन को सिकार हुनुभएको छ? प्रार्थना गर्नुस ~ Khabardari.com
डिप्रेसन को सिकार हुनुभएको छ? प्रार्थना गर्नुस
आस्था र भक्ति सबैलाई काम लाग्ने विषय हो । डिप्रेसनले सिकार व्यक्तिका लागि त झन् अत्यावश्यक हुन्छ । भजनकीर्तन वा प्रार्थना डिप्रेसनले पीडित व्यक्तिको उपचारमा सहयोगी साबित हुन्छ । जर्नल अफ अफेक्टिभ डिजअर्डरमा प्रकाशित एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यस्तै उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, 'डिप्रेसनले ग्रस्त व्यक्तिले अरू उपचारसँगै पूजापाठ पनि गर्ने गरे तिनीहरू छिटो निको हुन सक्छन् ।'
हार्वर्ड मेडिकल स्कुलको अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, ईश्वरमा आस्था राख्ने व्यक्ति मानसिक रूपले मात्र स्वस्थ रहँदैनन्, डिप्रेसनको उपचारको समय उनीहरूमा राम्रो परिणाम देखिनेसमेत गरेको छ ।
यो अनुसन्धानमा डिप्रेसन भएको १ सय ५९ व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म निरीक्षण गरियो । हरेक रोगीलाई ईश्वरमा तिनको आस्था र यसको उपचारमा पर्ने असरबारे १ देखि ५ सम्म अंक दिन भनियो । ईश्वरमा कम आस्था राख्ने व्यक्तिमा उपचारको असर ईश्वरमा आस्था राख्नेको तुलनामा कम देखियो ।
बदाम र ओखरले तौल कम
ड्राइफ्रुटको सेवनले मोटोपना बढ्दैन । बरु तौल कम गर्न सघाउ पुग्छ ।
यो अध्ययन स्पेनका वैज्ञानिकहरूले गरेका हुन् । त्यसअनुसार, दिनहुँ करिब ३० ग्राम ओखर र बोक्रा नताछिएको बदाम खाने गरे बोसो बढ्न पाउँदैन । बदाम र ओखरमा केही यस्तो तत्त्व पाइन्छ जसले मस्तिष्कमा भएको रसायन सेरोटोनिनको स्तरलाई बढाउँछ । यो रसायनले भोकको अनुभूति कम गर्छ ।
पक्षाघात, हृदयाघात र मधुमेहको लक्षणसहित मेटाबोलिज्मको समस्याले ग्रस्त २२ रोगीको १२ सातासम्म अध्ययन गरेर यो प्रभावको खोजी गरिएको हो । युनिभर्सिटी अफ बार्सिलोनाका वैज्ञानिकहरूले रोगीको खानपानमा बदाम र ओखरलाई सामेल गरे, जसले उनीहरूलाई तौल कम गर्न र स्वस्थ रहन सहयोग पुग्यो ।
कम खानाले मस्तिष्क तीक्ष्ण
कम खानाले दिमाग तेज हुन्छ । यो अनुसन्धानमा स्मरणशक्ति र सिक्ने प्रक्रियाको लागि महत्त्वपूर्ण सीआरईबी १ प्रोटिनमा ध्यान केन्दि्रत गर्ने निर्णय लिइएको थियो ।
वैज्ञानिकहरूले मुसामा प्रयोग गर्दा क्यालोरीको मात्रा कम गर्नाले सिक्ने प्रक्रियामा तीव्रता आउने पाए । स्मरणशक्ति बलियो बनाउनमा भिटामिन बीले सघाउँछ । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले आपmनो अध्ययनमा पाएअनुसार, दिनहुँ कुनै न कुनै रूपमा भिटामिन बी सेवन गर्नाले बुढ्यौलीमा डिमेन्सिया र अल्जाइमरबाट बच्न सकिन्छ ।
यो अध्ययनमा अढाइ सयभन्दा बढी व्यक्तिले भाग लिएका थिए । यसमा ७० वर्ष र अझ पाको उमेरका ती व्यक्तिहरू थिए, जसको स्मरणशक्ति कमजोर थियो । उनीहरूलाई खानामा दुई वर्षसम्म निरन्तर अंकुरित अनाज, केरा, सिमी र रातो मासु आदि मजाले खान दिइयो ।
प्रशस्त भिटामिन बी भएका यी वस्तु सेवन गर्ने व्यक्तिको स्मरणशक्तिमा तीव्र गतिले सुधार
भयो । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, सप्लिमेन्टको दाँजोमा भिटामिन बीयुक्त वस्तुको सेवन बढी फाइदाजनक साबित हुन्छ । यसैले हामीले भिटामिन बी पाइने खाद्यपदार्थलाई भोजनको नियमित अंग बनाउनुपर्छ ।